Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Naboridan-dRadanoara i Patrick Rajoelina
Azo ambara fa mifanalavitra toa an’Antsiranana amin’i Toliara ny haranitan-tsaina eo amin-dRadanoara Julien, izay mpampianatra momba ny fifandraisana iraisampirenena sy ny tontolon’ny fandraharahana ara-toekarena maneran-tany, sy i Patrick Rajoelina, izay minisitra vahiny misahana ny raharaha ivelany eto Madagasikara. Asa aloha raha nianatra an’izany diplaomasia izany i Patrick Rajoelina na tany amin’ny Garabola (pré-scolaire) dia nitsahatra tamin’ny fianarana fa tena tsy hita voaka ny farafahakeliny amin’ny resaka diplaomasia na ny fifandraisana iraisampirenena momba an’i Madagasikara hatramin’ny naha-minisitra vahiny misahana ny raharaha ivelany azy. Ny sary nivoaka teny rehetra teny moa dia zary manamarina izany satria amin’izy ministra vahiny misahana ny raharaha ivelany izao vao mianatra mamaky ny “Boky Lala sy Noro” ny lehilahy. Izany hoe izao izy vao mianatra miteny Malagasy. Ka minisitra Malagasy ve nefa izao vao mianatra miteny Malagasy dia hahagaga raha mivaralila ny zavatra nampiantsorohana azy, dia ny tontolon’ny diplaomasia?
Ny zavatra tsy azo ikombonam-bava aloha dia matoa notendrena hisahana ny raharaha ivelany ity minisitra vahiny antsoina hoe “Patrick Rajoelina ity dia tokony ho izy no hampibaribary ny firoboroboan’ny fifandraisan’i Madagasikara amin’ny sehatra iraisampirenena ka isitrahan’ny Malagasy ny vokatsoa tokony haterak’izany, izay tsy vitan’ny minisitry ny raharaham-bahiny rehetra teo alohany.
Omaly anefa dia naboridan-dRadanoara Julien ny tsy fahombiazan’ny tontolon’ny dipalomasia Malagasy, ary voatsindrona mivantana amin’izany ny minisitra vahiny Patrick Rajoelina. Nivantana mantsy Radanoara Julien nanipika fa “tsy mahagaga raha tsy mety mandroso mihitsy i Madagasikara ary vao mainka miha-mahantra ny vahoaka Malagasy satria na ny diplaomasiantsika Malagasy aza dia tsy araka ny tokony ho izy”. Ny fanampim-panazavan’i Julien Radanoara no nanoritany avy eo fa “any amin’ireo firenena afrikana andalam-pandrosoana na mahantra noho isika Malagasy indray isika no manana masoivohom-panjakana na ambasady betsaka fa any amin’ireo firenena aziatika izay efa tena misandratra na “emergent” dia zara raha misy ambasady Malagasy nefa ireo no tena tokony hiarahana miasa akaiky fa tsy ny afrikana.” Nosinganin-dRadanoara Julien omaly fa “i Aostralia izay firenena iray aty amin’ny kaontinanta akaiky antsika aty atsinana aty izay matanjaka dia matanjaka na ara-toekarena na ara-tsosialy aza tsy ananantsika Malagasy masoivohom-panjakana akory nefa samy aty amin’ny faritry ny Ranomasim-be Indiana.”
Enim-bolana izao no naha-minisitra vahiny misahana ny raharaha ivelan’i Madagasikara an-dRajoelina Patrick fa poaka aty ny asa tokony nataony. Tsy fantany akory ny “abd”-n’ny diplaomasia, indrindra fa izany fikatsahana ny tombontsoan’ny vahoaka Malagasy amin’ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena izany. Amin’ny maha-ministera isan’ny miantoka ny fiandrianan’i Madagasikara (ministère de souveraineté) ny ministeran’ny Raharaham-bahiny dia manana andraikitra goavana amin’ity Patrick Rajoelina ity ny filohampirenena ary takian’ny tombontsoam-bahoaka ny hanalàny azy raha tsy tian’ny filoha ny hivadihan’ny fanakianan’ny mpanara-maso maro any aminy.